Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Karakarain'ny seranam-piaramanidina Tokyo Narita tonga mpandeha anaty baoritra baoritra
Ny mpandeha rehetra tonga ao Japana ao amin'ny seranam-piaramanidina Tokyo Narita ankoatry ny hafa dia voasedra ho an'ny Coronavirus rehefa tonga amin'ny fipetrahana. Ny fitakiana entana any amin'ny seranam-piaramanidina Tokyo Narita dia nanjary hotely boaty ho an'ny mpandeha iraisam-pirenena tonga, miandry ny valin'ny fitsapana ny valanaretina coronavirus.
Ny saran-dalan'ny mpandeha mijanona ao anaty boaty dia 15,000 yen (US $ 140)
Ireo mpandeha tonga ao Japon, avy any amin'ny faritra voan'ny coronavirus any Etazonia sy Eropa, dia iharan'ny fizahana tsy maintsy atao. Ankoatr'izay, tsy afaka mamela an'i Narita miaraka amin'ny namana na fianakaviana amin'ny fiara manokana fotsiny izy ireo. Ny mpandeha tsy azo raisina dia voarara tsy hahazo fitateram-bahoaka na taxi.
Vokatr'izany dia maro no matory ao amin'ny trano fonenana baoritra vonjimaika, nomen'ny Governemanta Japoney mandra-piverin'ny mpitsangatsangana valin'ny fitsapana ny virus coronavirus.
Ireo kidoro amin'ny baoritra dia manana kidoro futon izay "tena tsara", araka ny fanadihadiana an-tserasera avy amin'ny mpandeha iray tonga tao Narita tamin'ny sidina ANA avy any Vietnam.
Mpandeha maro no nilaza fa sarotra ny matory satria mijanona amin'ny ora rehetra ny jiro.
Ireo fandriana eny ivelany dia misy fizarazarana amin'ny zoro mifanalavitra fa miharihary. Omena zava-pisotro sy tsakitsaky. Ny sasany amin'ireo fandriana dia misaraka amin'ny hafa, mifototra amin'ny sary, fa ny hafa kosa mifanakaiky.
Raha manome valiny fitsapana ratsy ny mpandeha iray dia afaka mandao an'i Narita izy ireo hanofa fiara na hitady fitaterana hafa; mahita satria mbola voarara tsy hampiasa fitateram-bahoaka.
Ny lalàm-panorenan'i Japon dia mandrara ny quarantine napetraka tsy maintsy atao, ny governemanta ihany no afaka mangataka ny hanana quarantine ho an'ny mpivahiny mandritra ny 2 herinandro.
Narita dia nitatitra ny fihenan'ny 85 isan-jato amin'ny sidina iraisam-pirenena. Nanidy ny iray amin'ireo lalamby izy tamin'ny alahady. Ity no fotoana voalohany nanakatonan'i Narita lalan-dàlana hatramin'ny nisokafan'ny seranam-piaramanidina tamin'ny 1978.
Ny mpandraharaha amin'ny seranam-piaramanidina koa dia mihevitra ny hanome moratorium ny saram-piantsonana sy ny vidiny hafa.
Any avaratr'i Japon, ny seranam-piaramanidina New Chitose akaikin'i Sapporo dia antenaina fa tsy hanana sidina iraisam-pirenena hatramin'ny faran'ny volana aprily. Ny sidina iraisam-pirenena mankany sy avy amin'ny seranam-piaramanidina dia niato tanteraka hatramin'ny faran'ny volana martsa noho ny fiparitahan'ny virus coronavirus.
Sapporo dia renivohitr'i Hokkaido, toerana fizahan-tany malaza.
Manondro ireo firenena sy faritra rehetra voatanisa etsy ambany ho faritra iharan'ny fandrarana fidirana. Fandrarana ny fidiran'ireo vahiny nitsidika ireo faritra tao anatin'ny 14 andro lasa raha tsy hoe misy tranga manokana.
Asia Brunei, Sina, Hong Kong, Indonezia, Macau, Malezia, Filipina, Repoblikan'i Korea, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam
Oseania Aostralia, Nouvelle-Zélande
Amerika Avaratra Kanada, Etazonia
Amerika Latina sy Karaiba Bolivia, Brezila, Silia, Dominica, Ekoatera, Panama
Eoropa Albania, Andorra, Armenia, Aostralia, Belzika, Bosnia sy Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Sipra, Czech, Danemark, Estonia, Failandy, Frantsa, Alemana, Gresy, Hongria, Islandy, Irlandy, Italia, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Litoania, Luxembourg, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Holandy, Makedonia avaratra, Norvezy, Polonina, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Espana, Suède, Soisa, fanjakana mitambatra, Vatican
Afovoany atsinanana Bahrain, Iran, Israel, Torkia
Africa Côte d'Ivoire, Repoblika Demokratikan'i Kongo, Egypt, Mauritius, Morocco